I-Casale Monticchio-I-Pigsties, ukuya kuthi ga kwi-3 yabantu
Igumbi elinomnyango ophumela ngaphandle yonke sinombuki zindwendwe onguHugues
I-100% yeendwendwe zakutshanje inike uHugues iinkwenkwezi eziyi-5 kunxibelelwano.
Senze eli gumbi le-90sqm ukusuka kwiihagu ezindala. Isizathu sokuba banike iihagu ezintathu ezintle ezijonge emazantsi iifestile ezigudileyo asisazi nanamhlanje!
Uyilo lweplani evulekileyo lwayilwa ukuba luthathele ingqalelo ukufikelela kwesitulo esinamavili njengoko le ikuphela kwendlu ekwinqanaba elinye. Imvakalelo iyafana nodonga lwamatye kwaye ezinye zipeyintwe mhlophe.
Yeyona ndawo ifihlakeleyo yamagumbi ethu njengoko ijonge emazantsi kumabala avulekileyo ukuya ngaseMercatello, apho kukho ibha entle eqhutywa nguPaola.
Ibekwe kumbindi we-Umbria, ifama yethu yenkulungwane ye-18, edweliswe ‘njengebaluleke ngokwembali’, ibuyiselwe ngononophelo kule minyaka ili-15 idlulileyo. Amahlathi akuwo omabini amacala entlambo akhuselwe kwizilwanyana zasendle.
I-Monticchio ibekwe kwinduli encinci kunye nomlambo waseNestore ohamba ngaphantsi. Kukho imvakalelo yokuba wedwa ngokupheleleyo kodwa siyimizuzu emi-5 kuphela kwizinto zasekhaya,
Injongo yethu kukudala amava awodwa ngelixa sihlala nathi kunye nokwabelana ngolonwabo olunikezwa ngu-Umbria.
Lo mhlaba unezindlu ezi-3 eziphangaleleyo kunye nendlu enkulu. Kukwakho nequla elizimeleyo elingenasiphelo (20m by 5m) elinethafa elijonge intlambo.
Injongo yethu ngelixa sasiyila, yayikukuba iflethi nganye ibe neyakhe isimilo, indawo apho iindwendwe zethu zinokujonga phambili ekubuyeleni emva kosuku olude lokuphonononga okanye ukungqengqa ngasechibini.
Zinikwe iziqwenga ezikhethekileyo esiziqokelele ixesha elide kwaye into nganye inebali eliqhotyoshelwe kuyo, esihlala sivuya ukwabelana ngayo.
Sihlala sikhuthaza iindwendwe ukuba zisixelele ukuba ziva ngathi kukho into engekhoyo okanye ukuba kukho indlela esinokuphucula ngayo indawo yokuhlala
Inkumbulo eyonwabileyo: IiPigsties kulapho saqala khona ukusebenza ngokwethu phambi kokuba sibandakanye abakhi. Ngandlel’ ithile sakwazi ukucenga abamelwane bethu basePerugia ukuba beze basincede sisuse udonga oluziimitha ezili-13.4 ubude. U-Tiziana wathatha ihamile yesileyi waqhubela phambili ewisa udonga lo gama abanye bezalisa kwaye bakhupha iibhala zamavili.
I-Monticchio inoxolo kakhulu, njengoko simi kumbindi wohambo lwendalo kwaye sijikelezwe lihlathi, iinduli kunye nebala.
Sikumgama oziikhilomitha ezi-3 ukusuka eSpina, ilali apho uya kufumana ivenkile enkulu, ibhula, ibhari, ipizzeria, ibhanki kunye nendawo yokuhlamba impahla. Zimbalwa iindawo zokutyela kule ndawo.
U-Andrew & Hugues bahlala kwipropathi kwaye baya kuba lapho ukuze bakukhulule ekufikeni kwakho kwaye ubonise indlu yakho kunye nepropathi. Sisoloko sifumaneka ngayo nayiphi na imibuzo, izalathiso, indawo yokutyela, ukubhukisha ukhenketho lwewayini njl, kwaye ukuba kuyimfuneko kaxakeka.
Sizama ukwabelana ngexesha kunye nondwendwe ngalunye malunga neglasi yewayini okanye isidlo sakusihlwa. Injongo yethu kukwabelana ngale ndawo imangalisayo yiMonticchio kwaye yenza wonke umntu ahlale ekhethekileyo.
U-Andrew & Hugues bahlala kwipropathi kwaye baya kuba lapho ukuze bakukhulule ekufikeni kwakho kwaye ubonise indlu yakho kunye nepropathi. Sisoloko sifumaneka ngayo nayiphi na imib…